Semalt: Ahoana no hanakanana ny tranokalan'ny Google Chrome?
Maro ny tranga mety ahafahan'ny olona manakana ny tranokalan'ny fidirana amin'ny tranokalany. Ohatra, ilaina ny mametra ny fahazoana miditra ankizy amin'ny toerana sasany. Ny ray aman-dreny koa dia tokony hijanona amin'ny zon'ny fiarovan'ny tenifototra ireo firewall ireo mba hametrahana ny fidirana tsy fidirana amin'ny tranokala hafa na tranonkala manokana. Matetika ny olona no manakana izany tranonkala izany na mampiasa teknikan'ny mpampiantrano. Na izany aza, ny fehezan-dalàna mihazakazaka dia mety ho fepetra sarotra. Izany no mahatonga ny olona sasany hampiasa ny Google Chrome hananganana ny fidirana amin'ny tranonkala.
Ao amin'ity torolalana SEO ity, Jack Miller, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt , dia mamaritra ny fampitahana Chrome ho ohatra iray mampiseho ity fomba ity.
Ahoana no hanakanana tranonkala iray
voafetra ho an'ny mpampiasa Google Chrome ity fomba fiasa ity. Na izany aza, ireo browsers hafa izay manana io fanitarana io dia mety hampihatra ny teknika hanakanana tranonkala. Ankoatra izany, ny fanitarana ny fahalianana eto dia ny extension extension SiteBlock. Misy fanitarana hafa toy ny SpyVisit, saingy ny fiasany dia mitovy na kely kokoa. Araho ireto dingana ireto:
Atombohy Google Chrome ary tsindrio ny 'settings'
Mankanesa any amin'ny 'menu plus' ary tsindrio ny 'extension'.
Hatramin'izao, afaka mandeha any amin'ny 'fanitarana bebe kokoa' ianao.
Manokatra ny tranokala Google Chrome ny menio. Tahaka ny fivahinianan'ny apps malaza, hitady ny 'SiteBlock' ary tsindrio ny fidirana..
Tsindrio ny 'add to Chrome' bouton hanomboka ny dingana fametrahana ary miandry azy hahavita.
Rehefa manaraka an'io fomba io ianao, dia tokony ho afaka hifehy ny tranonkalanao sy ireo tranonkala ahafahan'ny olona hitsidika. Tena ilaina ny manamarika fa ny Google-n'i SiteBlock dia anisan'ny Google extension. Tsy tokony hisy olana momba ny fahamendrehana na ny mpanoratra ity rindrambaiko ity. Ity dingana ity dia mila manampy ireo tranonkala izay ilainao hanohanana ity fanitarana ity. Azonao ampiasaina io fomba io hanampiana anao hisoroka ireo tranonkala:
Ao amin'ny tontolon'ny fikarohan'i Google, azonao atao ny mametra ny habaka ao amin'ny popups SERP
Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny sehatra.
Mandehana manantanteraka ny navigateur Chrome ary tsindrio ny SiteBlock.
Avy eto, tsindrio ny 'safidy.'
Hanampy adiresin'ny tranokala tianao halaina eo ambanin'ny 'tranokala voasakana. "
Tsarovy ny tsindrio 'Safidio safidy'
Azonao atao ihany koa ny manao lisitry ny tranonkala maro izay tsy tianao ho azon'ny olona hidirana. Zava-dehibe ny manaisotra ny 'www na https: //' ampahany amin'ny tranonkala izay misakana anao. Ity fomba ity dia afaka manome antoka fa hametra ny sehatra rehetra ianao na inona na inona ny protocol. Rehefa avy namonjy ireo fikandrana ireo ianao dia afaka manandrana ny addon amin'ny fiezahana hidirana amin'ny iray amin'ireo toerana ao amin'ny lisitra voasakana. Ny hafatra "Notokanana tamin'ny tranokala SiteBlock" dia manamafy ny fahombiazan'io fomba fiasa io.
Maro ny fomba ahafahan'ny olona manakatona ny tranokalan'ny browsers. Ohatra, mety misy ray aman-dreny te hanakana ny ankizy tsy hiditra amin'ny tranokalan'ny votoatin'ny olon-dehibe. Ao anatin'izany tranga izany dia mety manapa-kevitra ny hampiasa teknika samihafa ny olona mba hisorohana ity fidirana ity. Ity torolalana SEO ity dia afaka maneho anao ny fomba hanakanana tranonkala sasany mampiasa Chrome fanampiny. Avy amin'ny fitomboana tsotra 'SIteBlock', azonao atao ny mametra ny fidirana amin'ny sehatra sasany na tranokala avy amin'ny navigateur Chrome anao. Azonao atao koa ny mampihatra an'io fomba fikarakarana io ho an'ireo browsers hafa mampiasa an'io na fanitarana hafa Source .